Nagu saabsan - Jiangsu Dabaysha Dabaysha Dabiiciga ah ee Co., Ltd.
DUUB & RAAXO
FURASHADA FURASHADA & ILAALIYAHA
Tuur POWOW & CUSHION
FASHILKA & BULSHADA
Jiangsu Dabiiciga Dabaysha Dharka Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay 2000 magaalada Huaian, ee gobolka Jiangsu. Shirkadayadu waxay ku takhasustay soo saarida iyo iibinta dharka hudheelka iyo dharka guryaha oo ay ka mid yihiin: Qalabka Musqusha - Tuwaalada qubeyska, tuwaalada gacanta, tuwaalada wajiga, gogosha qubayska iyo qubayska; Dharka sariirta - gogosha sariirta, daboolka jiifka, kiisaska barkinta, xijaabka, dusha, barkimooyinka iyo furaashyada ilaaliya; Qalabka makhaayada - dharka miiska, gogosha, daboolka kursiga, daahyada iyo wixii la mid ah.
Waxaan diiradda saareynaa warshadaha linenka hudheelka ku dhowaad 20 sano, waxaan aheyn shirkad isku dhafan oo ah Cilmi baarista iyo Horumarinta linenka hudheellada, Naqshadeynta, Xirmooyinka, Suuqgeynta, Dhaqida, Kireynta, Dhoofinta, Ganacsiga Ganacsiga, Wadatashiga iyo Maareynta Maalgashiga Hoteelka. Shirkadeena waxay leedahay 980 shaqaale warshadeena waxay daboolaysaa aag dhan 52,000 oo mitir murabac ah. Awoodda wax soo saar ee xoogan waxay bixin kartaa adeeg waqtigiisa loogu talagalay macaamiisha adduunka oo dhan iyo awoodda wax soo saarkeennu waa: dharka gogosha sariirta 42,000 nooc bishii, qubayska 20,000 kumbiyuutar bishii, shukumaanno 200 tan bishii iyo maro miis 200,000 mitir laba jibbaaran bishii.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay alaab u gaar ah, warshad wax lagu tolo, warshad dye, warshad tolid, warshad tuwaal iyo xarun xirfadeed QC. Nidaamka Xakamaynta Tayada oo Xaddidan wuxuu xakameynayaa qayb kasta oo wax soo saar ah, taas oo hubin karta tayada ugu fiican iyo adeegga ugu fiican ee macaamiisheena.
Marka loo eego nidaamka maaraynta ee ISO9001, ISO14001 iyo OHSAS18001, Jiangsu Natural Wind Co., Ltd waxay dhistay iskaashi xasiloon oo muddo dheer ah oo lala yeeshay kooxo badan oo caan ah dal iyo dibadba: Sheraton, Westin, Hilton, Ritz-Carlton, Pullman, The Marriott Hotels & Dalxiisyada ， Kempinski Hotels iyo wixii la mid ah.
U hogaansanaanta fikradda dabeecadda, fudeydka, raaxada iyo caafimaadka, kobcinta la jaanqaadka Dabeecadda, iyo raadinta faa'iidooyinka wadajirka ah ee bulshada, Jiangsu Natural Wind Textile Co., Ltd waxay u abuureysaa qiimo weyn macaamiisha ruuxda hal-abuurnimo, farsamo wax soo saar wanaagsan adeeg xirfadeed!
Tiknoolajiyada wax soo saarka heer sare ah iyo adeeg xirfadeed
Aragtidayada horumarka iyo shahaadada u qalmidda
Aragtida horumarineed ee shirkaddu waa inay ku hoggaamiso warshadaha hal-abuurnimo, dejiso jaangooyo tayo leh, iyo inay horumariso horumar bulsho oo waara
Sawir kooxeed macaamiisha
Jiangsu Dabiiciga Dabaysha Dharka Co., Ltd.
Sida loo doorto dharka hudheelka
Nolosha Hotel linen
Tuwaalo midab leh, Shukumaan cudbi ah, tuwaalka wajiga, tuwaalka qubeyska, tuwaalka qubeyska la dhigo, daboolka dharka,